0.1 Bixinta FTC: Xiriirada xiriirka ah waxaa lagu isticmaalaa maqaalkan. WHSR waxaa laga helaa kharashka gudbinta ee ka orta ah shirkadaha ku qoran boggan. Orta ka orta ah raaxada ugu weyn ee ahaanshaha baloog blog wuxuu qaraa dib u eegista alaabada. Farxadda helitaanka baakadaha boostada, farxadda ku saabsan helitaanka shey cusub oo caawinaya qoyskeyga, cox farxadda helitaanka lacag ka timid raaxada gurigeyga ayaa atlı shaqadeyda ku saabsan qorista blogging-ka xirfadeed. Sidee ayaad u bilaabi kartaa? Asaasigaani wuxuu ku tusi doonaa sida aad u bilaabi laheyd dib u eegis sheyga. Tilmaamaha hadiyadda fasaxa ee leh dib-u-eegista iyo xiriiriyeyaasha ku xiran Xulashada alaabooyinka dib u eegista
0.3 Helitaanka və ya xulashada walxaha si dib loogu eego
1.1 1. Göz Sawir Sawir
1.2 2. Faa’iidooyinka Qaybtaan və Adeegga
1.3 3. Dhavaaqyada
2.4 4. So-jeedin dhacdo
Bixinta FTC: Xiriirada xiriirka ah waxaa lagu isticmaalaa maqaalkan. WHSR waxaa laga helaa kharashka gudbinta ee ka orta ah shirkadaha ku qoran boggan.
Orta ka orta ah raaxada ugu weyn ee ahaanshaha baloog blog wuxuu qaraa dib u eegista alaabada. Farxadda helitaanka baakadaha boostada, farxadda ku saabsan helitaanka shey cusub oo caawinaya qoyskeyga, cox farxadda helitaanka lacag ka timid raaxada gurigeyga ayaa atlı shaqadeyda ku saabsan qorista blogging-ka xirfadeed.
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad tixgeliso waa dhagaystayaashaada. Tani ma ahan orta geliya oo faa’iido kuu leh, mise dabcan ma kugula talin karta badeecadani in aad saaxiib la wadaagto dhageystayaashaada bartilmaameedsanaya? Xaqiiqdii waad dib u eegi kartaa badeecad kasta oo soo socota, laakiin hubso in alaabtaadu ay ka gudubto dhamaan seddexda dhibcood:
Waxay yihiin mumi aad rabto oo isticmaali karto;
Haddii aysan aheyn, dib ya eegistaada waxay u muuqataa iskiis ve shaqeynaya.
Bilirsiniz ki, fikirlərinizi təsdiqləyin, mumi saameynaya: waxaad saameyn ku yeelan karta dabeecadaha dhagaystayaasha ya caadooyinka iibsashada.
Markaad akhristayaashaada koraan si ay kuugu aammaanaan, waxaad dabiici ahaan dooni doontaa inaad kugula taliso waxyaabo waxtar leh iyaga. Haddii ay jiraan badeeco, adeegyo ama xitaa meelo aad horay ugu riyaaqdey oo ku habboon tiiyoo aad blogka diirada saareyso, tag oo qor gabal ku saabsan. Markaad sidaa sameysid, adiga waa saameyn – waa sida ugu fudd ee.
Marka ugu horeysa, ya helian lakag ama helitaanka alaab bilaash ah, laakiin waxaad si sahal ah dib ugu eegi kartaa aragidaada.
Abuuri boosto blog ah oo kugula taliya alaabta iyo isku xirnaanta xiriiriyahaaga barnaamijyada sida Barnaamijka iskaashiga Amazon, Xubinta Guddiga və ya La qaybso iibka. Fikradaha waxaa ka orta ah hagaha hadiyadaha fasaxyada, cuntooyinka ay ku jiraan maaddooyinka xiriirka la leh, safarada socdaalka, qalabka daabacaadda bogga, martigelinta, bloglar, ama "waa inay lahaadaan" xaalladaha ku jira waxyaabaha sida tiknoolajiyada sare, muuqaalka xilliga ama dib u noqoshada alaabta dugiga.
Tusaale ahaan waa tilmaame hadiyado ah oo aan u abuuray akhristayaasha aan ugu dambeeyay ee Noorway (araq seyr sax ah). Hagaha hibada aya aad u va nede səbəbə səbəb olursan koreyso, waxaad ka qaadi kart shirkadaha inay kaqaybqaataan hagahaaga.
Helitaanka və ya xulashada walxaha si dib loogu eego
Bog internet ah oo ku saabsan waalidnimada guud ayaa yeelan doonta xulasho ballaaran oo alaab ah oo laga xusho. Sa kastaba ha noqotee, baloog ku saabsan “la noolaanshaha cagaaran ee carruurta” ayaa yeelan doonta xulasho yar oo ah badeecado iye adeegyo laxiriira – ya o keliya alaabada carruurta u wanaagsan. Boostis ku saabsan qalabkii ugu dambeeyay ee farsamada halkaas kuma jiri doonaan dhagaystayaashaas.
Waxyaabo qala oo gaar ah oo aad u wanaagsan oo dib-u-eegis yao kor u qaadaya wa adeegyo martigelinta veb. Waa maxay səbəbta? Sababtoo ah waa mum "jilicsan" oo leh baahi weyn – qof kasta oo doonaya inuu joogsado online wuxuu u baahan yahay martigaliye websaydh. Waxaad u baahan tahay oo aad isticmaashaa ortada. Sidaas İnternetdə Daha baxdı?
Qalabka qoysaska ee la heli karo si kor loogu qaado ShareASale. Aniga i arko, buib iibsasho buo oo shakhsi ah, ayaa bixinaya 10% ee xubin walba oo iibka ah. Waxaa jirk shirkado 152 və ya daha çox vergi paylaşmaq ShareASale (diiangangelinta edir).
1. Göz Sawir Sawir
Noocyada SOMALIYAHA MARKU U SHAQEEYA Marka aad sheygooda ka dhigeyso ortalama wanaagsan, marka sawirro badan qaado oo eyni waxkasta oo aad kartid si aad u aragto sawirka u frican.
Hadday tahay shey wax lagu karsado, bu sheyga iyo saxanka ka dhashay ee aad abuurtay. Haddi aadan sawir fi ka qaadan karin, weydiiso macmiilka sawir ka – ka Fiican inaad haysato mum u muuqda mum aan fiicnayn haba yaraatee laakiin waaad barataa inaad u qaaddo sawirro macquul ah oo macquo ah …
Tusaale ahaan, haddii aad dib u eegtay adeegga nadiifinta, waxaad ku garaaci karta calaamada baabuurka, kooxda iyo qalabka, iyo kahor / kadib seyrrada meelaha ay nadiif yihiin.
Sawirka hoos ku qoran waa dib-u-eegis loogu talagalay buugaagta "Dondurulmuş." Oeysiis və ya haysto seyrro badan oo macquul ah, sidaa darteed waxaan ku soo celin karaa wakhti ka dib, oo bedelaya guddida garabka iy mawduuca mar kasta oo aan eynieyo.
Tusaale kale – Jerry’nin Dib-u-eegida InMotion – Wuxuu isticmaalaa tiro qiimo leh oo ku daraya sawirada ya juantusyada si uu uux buuxiyo qoritaanka.
Animasiya GIF və ya qaraarka qaranlıqları görmək istəyir.
2. Faa’iidooyinka Qaybtaan və Adeegga
Tusaale ahaan, haddii ay tahay alerjiyo xasaasiyad leho xilliga gu’ga, waxaad ku qori kartaa waxyaabaha ku saabsan sida ay ujirta waqtigan sanadkaan adiga ya dadka kale ee xasaasiyadda qabda.
Erey xasuusin leh: noqo daacad! Ha ku şubin walxo; Fiiri waxyaabaha wanaagsan ee aad ku riyaaqday ee ku habboon ololaha calaamadda haddii ay suurtogal tahay ama haddii kale suura gali karto xaqiiqooyinka. Isku gun sidii aad wax u soo bandhigtey intii aad awoodi kartid oo aad xoojisid mum kasta oo aad jeceshahay.
Shir sanad gudihiis ah, waxaan kaga qeybgalay Q&Bir oo ay weheliyaan koox magac ku yaal. Qaadashada muhiimka ah waxaan ka bartay wakiil wakiil ah taasi waa waxba waa orta heare sare ah. Haddii aad ku qorto 100% dib-u-eegis wanaagsan, qofna kuma rumaysan doono, luminaayo luminta.
Qor mumi saabsan qulqulka, laakiin waa inaad u dulqaado.
Xasuuso, waxaad isku dayeysaa inaad dadka ku wado si aad u iibsato sheygan. Si kastaba ha noqotee, haddii alaabtu ay tahay orta dud ah ama cilladuhu ay aad u badan yihiin si ay dhab ahaantii ugu taliyaan oo aad u heshay badeecadda mushaharka, isla markiiba la xiriir iibiyaha oo weydii waxa la eyni. Waxaa laga yaabaa inayad doonayaan inaad joojiso şaqada kib dib və eegista, waxay ku hagaajin karaan cilladda ama laga yaabo inayna ogaanin dhibaatada oo ay ku weydiiyaan inaad dib u digto boostada. La hadalka iyaga waa iyo jeer jawaabta iyo waxay siinaysaa aragti wanaagsan oo adiga kugu habboon.
Ha ka baqin inaad tilmaamto cilladaha sheyga / adeegga – xitaa haddii lacag laga siinayo shirkadda. Jerry’nin saytı ətrafındakı yerdən xəbərdarlıq edin – elektron poçtu və eegista.
Markaad liis gareysid waxyaabaha wanaagsan iyo cilladaha, waxaad siin karta fikrinada guud – inaad noqotaa orta hal abuur leh sida aad jeceshahay. Samee nidaam qiyaas ah, wuxuu siinayaa suka ugu sareeya, mujiji ilmaha ilmo dhoola – mum kasta oo adiga kuu fiican.
Ugu dambeyntii, ya faahfaahinta ku saabsan badeecada, ahaan xarig halka laga helo.
U sheeg sheeko jilicsan si aad u muujisid astanta bartada.
Hadday fiicantahay, waxay xitaa la wadaagi karaan dib u eegistaada dhagaystayaashooda – waana muujinta aad u fiican bartada. Haddii aad ku bilowdo sheeko shaqsiyadeed ya o qasab ah iyo sida sheygu mum ugu taray noloshaada, waxaad sidoo kale heli doontaa jawaabta akhristaha oo wanaagsan. Hadday fiicantahay, waxay xitaa la wadaagi karaan dib və eegistaada dhagaystayaashooda – və ya muicinta aad u Fiican bartada.
Iyada oo ololaha dib u eegista lagu bixiyo, mum və ya eynieyey qaraalladaydii – qaraalkaygu wuxuu igu dihirrigeliyay niyadjab aan ka qabay muusigeyga badan ee gurigeyga!
Xeerarka FTC ilə əlaqə qurmaq üçün blog yazmaq üçün jirto mum kasta oo nooca lacag celinta, oo ay ku jirto lacag caddaan ah, bilaash ama qiimo dhimis ah, rasiidh, shahaadooyin hadiyadeed, elita amacia /.
Isticmaal fayaqabka haboon si aad u soo bandhigto warbaahinta bulshada. Waxaan isticmaalaa "#ad" ee mesajlar ya warbaahinta bulshada sida ay u gaaban tahay oo sahlan tahay in lagu xiro meel kasta. Waxaad ku dhejin karta boostadaada, "Waxan soo iibsaday alaabtan si dib-u-eegis ah, laakiin fikadaha oo dhan ayaa aniga ii ah," alaabooyinka aad heshay lacag la’aan.
Xusuuso inaad sheegto haddii aad heshay badeeco bil, ah, xitaa haddii aad kaligaa wakhti kale ku ruxayso. Wa wax jahwareer ah, lakiin talada ugu wanaagsan ee a waligey maqlo waa, "Marka bir qaba vurdu, şaka və ya qaado."
Ugu dambeyntii, cox gozel doorta etdim "maya adigoon" ku xirneyn xidhiidhadaada, xiriiriyahaaga ama mum kale. Haddii uu calaamadku diiday inbal aqbalo tilmaan-bixintaas, ka tag.
Tani waa qayb ka orta ah liiska waxa aad u baahan tahay inaad sameyso ka hortagaan blog-kaaga inuu dacwad soo oogo.
Alaabada aad horey u laheyd oo aadan helin mum magdhow ah, waad ka boodi kartaa tan – ilaa aad jeclaan laheyd inaad shaaca ka qaaddo inaadan helin mum bedel ah boostada.
Waa mum la aqbali karo si ay u noqoto orta si aad u eegto waxyaabaha aad jeceshahay. Hooska ganacsiga, waxay u badan tahay in aad dhalisid waxyaabo dib u eegis ah.
Waxaa laga yaabaa in laguu soo bandhigo kuuboonada halkii alaabtu bilaabi lahayd. Meelahaaga çox səbəb olur, səbəbi ayaq üstə qaldırmaq və ya bu barədə danışmaq lazımdır. Waxaad iska dhigtaa inaad ku qoreyso daboolid codsi shaqo!
Xasuuso inaad ku darto jaantusyadaada ya xirmada warbaahinta.
Suuqgeynta saamileyda ah waa warshad horumarineed oo waxay noqotey il muhiim ah oo ah dakhliga internetka loogu talagalay hooyooyinka badan (oo ay ka mid yihiin kuwa kale) bloggerlər. Badeecada shirkadda waxay kor u qaadaa alaabta ama adeegga la raaci karo iyada oo la adeegsanayo xirmooyinka, nambarada, lambarrada taleefoonka, iwm, taas oo adiga kuu gaar ah. Kadibna waxaad kasataa qayb ka orta ah dakhliga marka uu iibku dhaco iyada oo loo marayo xiriirkaaga gaarka ah.
Şabakad xiriiriye ah ayaa badanaa ah mashruuc dhexdhexaad ah oo u dhaxeeya shirkad ya shirkado ganacsi. Waa qayb ka orta ah isla’egta suuq-geynta shirkadda oo egtahay in ay ka baxdo, maadaama shirkadaha badankood mum kab qaban badeecooyinka / adeegyada tooska ah, laakiin wali waa xog muhiim ah oo lagu ogaanayo.
Guad ahaan, shabakad xiriiriye ah ayaa inta badan waxaa isticmaala ganacsatada si ay u maareeyaan barnaamijkooda xiriirka iyo sidoo kale waxay u dhaqmaan sida xogta alaabtooda. Daabacayaashu waxay markaa dooran karaan alaabada ay doonayaan in u kor u qaadaan, iyagoo kuirir suuqooda.
Xubinta Guddiga ya La qaybso iibka waa laba ka ort ah shabakadaha xiriirka ugu caansan.
Waxyaabaha cusub, waxaan ku talin lahaa Tomoson, kaas oo leh ololeyaal badan oo loogu talagalay baranbarayaasha leh dagagstayaal yaryar. Şəbəkə, BlogSpWire və SheSpeaks ilə əlaqəli bir şey tapa bilərsiniz. Waxaad sənin kimi bir ana kartı hazırlayırsan, MomSelect, Hooyo və Bloggy Moms.
Marka aad bilowdo insoad dhisato dhagaystayaal, waxaad u-qori kartaa meelaha u baahan in la eego boggooda sare, sida MomCentral, Qızlar Ağıllı və Dharka Bulshada.
4. So-jeedin dhacdo
Tani waa halka xiriirka blogger və ya cooxaha taageerada ay doonayaan inay yimaadaan.
Gugaantan ayaan ka qayb qaatay Waqtiga Ciyaarta majaladda Dhacdada alaabada blogger New York, Magaalada, halkaas oo shirkaduhu ku soo bandhigaan waxyaabo cusub oo lagu sii daayo iyo demos markay uruurinayaan kaararka dad. Dhacdooyinka noocan ah caadiyan waa casuumad keliya, səbəbi səbəb kimi ay lacag ugu bixiso inay iska diiwaangeliso kooxda blogger-ka maxalliga ah, oo la mid ah taaga. Philly Sosial Media Moms və Yaşıl Qardaşlığı ilə əlaqəli bir problemdir. Waxaan wadaagnaa munaasabadaha, dallacsiinta, fursadaha, talobixinta xirfadda leh waxaanan sare u qaadnaa midba midka qala boggiisa.
Marka ayaq üstə bir qabartma və ya eegista ilə müqayisə oluna bilər.
Haddii ay codsadaan mum v a macquul ahayn, diidi inta aadan bilaabin. Sumcad leh, sumadaha blogger-fərasətli waxay kuu soo diri doonaan xiriiriyeyaal boggooda halkii ay ka isticmaali lahaayeen xiriirada qaraalka ee spam. Ballan qaasa aasaaska – daha çox, “500 söz yazısı”, Facebook-da & Twitter – bu və ya dibna gaarsiiya waxyaabo dheeri ah, sida wadaagid dheeri ah ama pinning. Cox xahis edirdim sumadda markaad kobcinayso faallooyinkaaga.
Dadka mum qara qara ma lacagbaa?
Tani waxay kuxirantahay maadaama ay jiraan tiro badan oo bogag internet ah oo aan dhamaantood dakhli abuurin. Furaha meheradda ayaa ah taraafikada, ya goobaha taraafikada ee hooseeya inta badan ma awoodaan inay lacag helaan. Wa kuwan qaar ka orta ah tilmamaha waxqabadka ah wado waddo badan oo blog ah.
Immisa lacag ah ayaad ka samayn karta tarafafada bogga?
Sida qaanuunka suka, dakhligu wuxuu ku xiran yahay sharciga beddelashada, taasoo la micno ahay inay jirto inta badan boqolkiiba qiyaasta taraafikadaada oo soo iibsan doonta badeecad. Lacagta aad kasbato isbedel kasta waxay kuxirantahay badeecada (yada) aad dalacsiiso.
Tualaale: Heerka yataq otağı 2.5% və ya 100% ucuz yataq otağı, 2500 $ satılmaq üçün 1000 dollar.
Bide blogga baxın?
Blogger-lərlə əlaqə qurmaq və bloqdan istifadə etmək üçün bloga müraciət edin. Mid ka orta ah qaababka ugu caansan waa iyada oo loo maro warbaahinta bulshada, halkaas oo waxyaabo aad u tiro badan ay ka faa’iidi karaan wadaagista bulshada. Bilow ahaan, waad u tixraaci kartaa tan 5 istiraatiijiyad aasaasi ah oo lagu kobcinayo akhriska bartaada.
Ayaa kuadaday Dheeraad ah – Blogger və Youtuber?
Youtube badiyaa waxay ka shaqaysaa nidaamka xayeysiinta kaas oo ka codsada dadka isticmaala inay yeeshaan aragtiyo badan si ay ganacsi ahaan ugu noqon karaan. Bogagga mum ka qara ee ka shaqeeya nidaamka iskaashatada waxay lahaan karaan karti ay ku kasadaan mum mumden badan oo ka hooseeya qaddarka hoose ee tarafafada.
Haddii aad raadineyso habab kale oo aad ku kasbato mum badan oo internetka ah, waan helnay 50 fikir düşüncə və ya kadka tooska ah waad raaci kartaa.
Ballan qaad ya adeysi va ereyada furaha maalinta bilowga ah. Vaqti ayey qaadataa in laga abuuro taraafikada websaydhada inta lagu gudajiro xilliyada buynuz, baloogyo badan ma soo saaraan dakhli badan. Dhisidda xasillooni xoog leh oo ka kooban waxa ay gacan ka geysan doontaa kordhinta tarafikadaaga waqti ka dib – waana xilligaas in lacagtu ay bilaaban doonto inay qulqulato.
Waxaan si xoogan kuugula talinayaa inaad akhridaan hage faahfaahsan si loo bilaabo baloog halkaas oo aan ka wada hadalnay mum kasta min A ilaa Z.
Hadda, vaa waqtigii aad ku boodi lahayd oo aad bilaabi lahayd. Ku celceli waxyaalaha aad jeceshahay oo u isticmaal warbaahinta bulshada si aad u dardar geliso qaraaladaada, adoo ku dheji sumadda aad u magacowday. Kaliya ha istaagin hal ama laba qaraal – adkaysigu waa fure. Hagaajinta boogahaaga, haddii aad cusub tahay – la wadaag boggaaga saaxiibada iyo xubnaha qoyska si aad u bilowdaan, barao oo hirgeliyaan SEO wanaagsan, oo sii daabac waxyaabaha wanaagsan.
Waxaad samayn kartaa tan. Jerry Low, və ya milkiilaha boggan, wuxuu bilaabay WHSR oo keliya bogga dib u eegista martida. Bal firi sida uu isaga və kooxdiisa ay yantaması və yimaadeen – WebHostingSecretRevealed.net (WHSR) wuxuu noqday ortada ka orta ah goobaha ugu fiican ee martigelinta ee halkaas ka jira..